शेयर बजारमा सामान्य सुधार, ३६ करोडको शेयर कारोबार | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण शेयर बजारमा सामान्य सुधार, ३६ करोडको शेयर कारोबार
on: January 10, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, ३६ करोडको शेयर कारोबार
पुस २६, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव १३ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । यस दिन कारोबार भएको ४० मिनेटसम्म उतारचढामा रहेको परिसूचक सोपछि अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको छ । १ हजार १ सय ७९ दशमलव ६० विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक एक घण्टाको अवधिमा बढेर १ हजार १ सय ८३ दशमलव १९ विन्दुसम्म पुगेको थियो । तर अन्त्यमा १ दशमलव ४८ अंकले बढेर १ हजार १ सय ८० दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । ११ समूहको परिसूचकमा सात समूहको परिसूचक बढ्न पुगेको छ भने चार समूहको परिसूचक घट्न पुगेपछि नेप्से परिसूचकमा थोरै अंकले मात्र वृद्धि भएको छ । सातामा तीन दिन परिसूचक बढेको थियो भने दुई दिन परिसूचक घटेको थियो । एक सातामा कारोबारको अन्तिम दिन र शुरुको दिनमा गरी परिसूचक १० दशमलव शून्य ५ अंकले बढेको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम रू. १ करोड ८४ लाख बढेकोे हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बढेर २ सय ५० दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको छ ।
१६३ कम्पनीको कारोबार
कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीमा ६७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न पुगेको छ भने ५७ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ । साथै, ३९ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । सानिमा इक्विटी फण्डको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ९ दशमलव ९३ मा कारोबार भएको छ । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य ५ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ६ सय ६५ मा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सिनर्जी पावर डेभलपमेण्टको शेयर मूल्य ५ दशमलव १० प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ९३ मा कारोबार भएको छ ।
गत हप्तामा गरिएको बजार परिसूचकको सम्भाव्य रेञ्ज (बजार बढ्दै गएमा) १ हजार २ सय १९ दशमलव ६९ देखि १ हजार १ सय ७८ दशमलव ४६ विन्दुसम्म (बजार घट्दै गएमा) पुग्ने संभावना गरिएको थियो । सोही अनुसार बजार धेरै बढ्न पनि नसकेको र धेरै घट्दै पनि नगएकाले लगानीकर्ताहरुको लागि आगामी हप्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था छ ।
पुस १ गतेदेखि २६ गतेसम्मको मैनबत्ती चित्र